Home Wararka NISA oo loo heystay kiiska Ikran oo haddana loo xilsaaray in aay...
NISA oo loo heystay kiiska Ikran oo haddana loo xilsaaray in aay Baarto [Sababta?]
Hay’adaha Garsoorka dowladda Soomaaliya ayaa marki ugu horeeyay muddo Bil ah war ka soo saartay kiiska sarkaalad u shaqeyneysay Hay’adda Sirdoonka Soomaaliya ee NISA oo la waayey aakhirkii Bishii hore.
Xeer Ilaaliyaha Guud ee Ciidamada Qalabka Sida Genaraal Cabdullaahi Buulle Kamey ayaa shaaciyey inuu magacaabay Saddax Sarkaal oo ka kala Socdo Xafiisyada Xeer ilaalinta, Boliiska & Nabad-Sugidda si ay Baaritaan ugu saeeyaan a Kiiska Ikraan Tahliil Faarax oo la la’ yahay tan iyo 26-kii June Sanadkan.
Arrintan ayaa ka danbeysay markii ay qoyska Ikraan Tahliil dacwad ka furteen Maxkamadda Milateriga, taasoo muddo kadib uu aqbalay xeer ilaaliyaah ciidmada Qalabka Sida.
Waxaa la yaab ku noqotay qoyska Ikraan in isla NISA aay qeyb ka noqoto saraakiisha loo xil saaray in baaraan kiiska Ikraan iyo halka aay ku danbeysay geeri iyo nolol. Ujeedka ugu weyn ayaa ah in NISA aan loo aqoonsan in aay tahay hay’adda aay ku maqan tahay Ikraan oo muddo bil ka badan la la’ayahay.
“Xafiiska Xeer ilaalinta Ciidamada Qalabka Sida ayaa aqbalay furashada Gal-Dacwadeed ay u soo gudbisteen Ehelka Maqanyd Ikraan Tahliil” ayaa lagu yiri warka lagu baahiyey Warbaahinta Dowladda.
Xeer Ilaaliyaha ayaa faray Taliska Hay’adda NISA inay la shaqeeyaan Saraakiisha magacaaban Waddo kasta oo lagu Gaari karo Danta Cadaaladda.
Qoyska iyo beesha ay kasoo jeedo Ikraan Tahliil ayaa ku eedeeyay Hay’adda NISA inay ka danbeysay maqnaanshaheeda, waxaana soo baxay warar kala duwan oo ku saabsan kiiskeeda.